Iindaba-Uhlalutyo lwezinto eziphambili ezichaphazela i-spunbond engeyiyo impahla yomzimba
Uhlalutyo lwezinto eziphambili ezichaphazela i-spunbond engeyiyo impahla yomzimba
Kwinkqubo yokuveliswa kwe-nonwovens esontiweyo, izinto ezahlukeneyo zinokuchaphazela iipropathi ezibonakalayo zeemveliso.
Uhlalutyo lwezinto eziphambili ezichaphazela iipropathi zamalaphu ziluncedo ekulawuleni iimeko zenkqubo ngokuchanekileyo kwaye zifumane ii-nonwovens eziphothiweyo ze-PP ezinomgangatho olungileyo ukuze zilungele ukusetyenziswa kwabathengi.
Uhlobo 1.Polypropylene: ukunyibilika isalathiso kunye nobunzima ezinto
Ezona zikhombisi ziphambili zomgangatho weplypropylene zizinto ezinobunzima beemolekyuli, ukuhanjiswa kobunzima beemolekyuli, isotacticity, isalathiso sokunyibilika kunye nomxholo womlotha.
Abathengisi bePolypropylene bakwimilambo yeplastikhi, babonelela ngezinto ezingafunwayo zepolypropylene kumabakala ahlukeneyo kunye nokubalulwa.
Ukwenza i-spunbond nonwoven, i-polypropylene yesisindo semolekyuli ihlala ikuluhlu lwe-100,000-250,000. Nangona kunjalo, kuye kwangqinwa ukuba ukunyibilika kwepropathi kunyanzeleka ukuba isebenze kakuhle xa ubunzima bemolekyuli bumalunga ne-120000. Isona santya siphezulu siphezulu sikweli nqanaba.
Isalathiso seMelt yiparameter ebonisa iipropathi ze-rheological yokunyibilika. Isalathiso sokunyibilika kwesuntswana le-PP lespunbond sihlala siphakathi kwe-10 ukuya kuma-50.
Isalathiso esinyibilikayo esincinci kukuba, kokukhona ubushushu bukhona, umncinci kuyilo loyilo, kwaye ubungakanani besayizi yefayibha ephantsi kwemeko yokunyibilika okufanayo kwispinneret, ke ii-nonwovens zibonisa iimvakalelo zesandla esomeleleyo.
Xa i-melt index ikhudlwana, i-viscosity ye-melt iyancipha, ipropathi ye-rheological iza ngcono, kwaye uxhathiso loyilo luyancipha. Phantsi kwemeko efanayo yokusebenza, uyilo oluninzi luyonyuka. Ngokunyuka kwesidanga sokuziqhelanisa nee-macromolecule, amandla okophuka kwe-nonwoven aya kuphuculwa, kwaye ubungakanani bomsonto buya kuncitshiswa, kwaye ilaphu liza kuziva lithambe ngakumbi ngenkqubo enye, ukuphakama kwesalathiso sokunyibilika, amandla okuphuka enza kakuhle ngakumbi .
2. Ukushisa okujikelezayo
Ukubekwa kobushushu obujikelezayo kuxhomekeke kwisalathiso sokunyibilika kwezinto ezingafunekiyo kunye neemfuno zeempawu ezibonakalayo zemveliso. Ukuphakama kwesalathiso sokunyibilika kufuna ubushushu obujikelezayo obuphezulu, kwaye ngokuchaseneyo. Ubushushu obujikelezayo buhambelana ngqo ne-viscosity ye-melt. Ngenxa yokunyibilika okuphezulu kokunyibilika, kunzima ukusonta, okukhokelela kubunzima bentsimbi eyaphukileyo, eqinileyo okanye erhabaxa, echaphazela umgangatho weemveliso.
Ngoko ke, ukwenzela ukunciphisa i-viscosity ye-melt kunye nokuphucula iipropati ze-rheological ze-melt, ukwandisa ukushisa kwamkelwa ngokubanzi. Ubushushu obujikelezayo bunefuthe elikhulu kulwakhiwo kunye neepropathi zemisonto.
Xa iqondo lobushushu elijikelezayo libeka phezulu, amandla okophula aphezulu, ulophu olunamacala amancinci, kwaye nelaphu liziva lithambe ngakumbi.
Ukuziqhelanisa, ubushushu obujikelezayo buhlala buseta i-220-230 ℃.
3. Isantya sokupholisa
Kwinkqubo yokwenza nonwovens spunbonded, izinga ukupholisa vulu kunempembelelo enkulu kwiipropati ebonakalayo nonwovens spunbonded.
Ukuba ifayibha ipholile kancinci, ifumana uzinzo lwekristale eyomeleleyo, engalungelanga ukuba imicu idwebe.Ngoko ke, kwinkqubo yokubumba, indlela yokwandisa ivolumu yomoya opholileyo kunye nokunciphisa ubushushu begumbi elijikelezayo lihlala lisetyenziselwa ukuphucula ukwaphula amandla kunye nokunciphisa ukunwebeka kwelaphu elingaphothiweyo elingalukwanga. Ukongeza, umgama opholileyo womsonto ukwangokunxibelelene ngokusondeleyo neempawu zawo. Ekuvelisweni kwamalaphu angalukwanga asontiweyo, umgama wokupholisa ngokubanzi uphakathi kwe-50 cm kunye ne-60 cm.
4. Iimeko zoYilo
Inqanaba lokuziqhelanisa nekhonkco yemolekyuli kwifilament yinto ebalulekileyo echaphazela ukwaphuka kobude be-monofilament.
Ukufana kunye nokwaphula amandla e-nonwovens spunbonded kunokuphuculwa ngokwandisa umthamo womoya wokutsala. Nangona kunjalo, ukuba umthamo womoya wokutsala mkhulu kakhulu, kulula ukwaphula umsonto, kwaye uyilo luluqilima kakhulu, ukujongwa kwepolymer kuthanda ukugqibelela, kwaye ukukhanya kwepolymer kuphezulu kakhulu, okuya kunciphisa amandla empembelelo kunye nobude ngexesha lekhefu, kunye nokwandisa ubungqindilili, okukhokelela ekunciphiseni kwamandla kunye nobude belaphu elingalukwanga. Kuyabonakala ukuba amandla kunye nobude be-nonwovens spunbonded bayanda kwaye banciphe rhoqo ngokunyuka kwevolumu yomoya yokutsala. Kwimveliso yokwenyani, inkqubo kufuneka ihlengahlengiswe ngokweemfuno kunye nemeko eyiyo ukuze ufumane iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
5. Ubushushu lothuli eshushu
Emva kokuba i-web yenziwe ngokuzoba, ikhululekile kwaye kufuneka ibotshelelwe ngokuqengqeleka okushushu. Isitshixo kukulawula ubushushu kunye noxinzelelo. Umsebenzi wokufudumeza ukuthambisa nokunyibilikisa ifayibha. Umyinge weentsinga ezithambileyo nezihlanganisiweyo zichonga iipropathi ezibonakalayo zelaphu le-spunbond nonwoven.
Xa iqondo lobushushu liqala phantsi kakhulu, kuphela yinxalenye encinci yemicu enobunzima obuphantsi beemolekyuli ithambe kwaye inyibilike, imicu embalwa ibotshelelwe kunye phantsi koxinzelelo. Imicu kwiwebhu kulula ukuyityibilika, ukophuka kwendwangu engalukwanga incinci kwaye ubude bukhulu, kwaye ilaphu liziva lithambile kodwa kunokwenzeka ukuba libe fuzz;
Xa ubushushu obuqengqelekayo bushushu, inani lefayibha ethambileyo kunye nenyibilikile inyuka, iwebhu yefayibha ibotshelelwe ngokusondeleyo, akukho lula ukuyityibilika. Ukwaphuka kwamandla kwelaphu elingalukwanga kuyanda, kwaye ubude bukhulu. Ngapha koko, ngenxa yokuqina okuqinileyo phakathi kwemicu, ubude buyanda kancinci;
Xa amaqondo obushushu enyuka kakhulu, amandla e-nonwovens aqala ukwehla, i-elongation iyancipha kakhulu, uziva ilaphu liba lukhuni kwaye linyibilike, kunye namandla okondla anciphise izinto eziphantsi, kukho imicu encinci kwindawo eshushu yokuqengqeleka kwaye incinci ubushushu obufunekayo ekuthambiseni nasekunyibilikiseni, ngoko ke ubushushu obuqengqelekayo obushushu kufuneka bube phantsi. Ngokulandelanayo, kwizinto ezinobunzima, ubushushu obuqengqelekayo obuphezulu buphezulu.
6.Ukuhamba koxinzelelo olushushu
Kwinkqubo yokubopha yokuqengqeleka kushushu, umsebenzi wokuqengqeleka komatshini oshushu wokuqengqeleka kukwenza ukuba imicu ethanjisiweyo yanyibilika kunye ngokusondeleyo, yonyusa umanyano phakathi kwemicu, kwaye yenze ukuba kungabikho lula ukuba imicu.
Xa uxinzelelo lomgca oshushu usisiphantsi, uxinano lwefibre kwindawo ekucinezelwa kuyo ayilunganga, ukungqinelana kwefayibha akukho phezulu, kwaye umanyano phakathi kweentsinga lubi. Ngeli xesha, isandla uva ngelaphu spunbonded non-ephothiweyo kuthambile noko, i elongation ngexesha lekhefu likhulu kakhulu, kodwa amandla ngokwaphula liphantsi;
Ngokuchasene noko, xa uxinzelelo lomgca luphezulu kakhulu, isandla siziva selaphu eselukiweyo esingalukanga sinzima, kwaye ubude kwikhefu buphantsi ngokuthe ngcembe Kodwa amandla okuphula aphezulu. Ukucwangciswa koxinzelelo oluqengqelekayo kushushu kunento yokwenza nobunzima kunye nobukhulu bamalaphu angalukwanga. Ukuze kuveliswe iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomsebenzi, kufuneka ukhethe uxinzelelo lothuli olushushu olufanelekileyo ngokweemfuno.
Ngelinye igama, iipropathi ezibonakalayo zamalaphu angalukanga sisiphumo sonxibelelwano lwezinto ezininzi. amalungiselelo imveliso nenjongo ethile nokubonelela umthengi othandekayo nelaphu nonwoven kakhulu.
Njengomvelisi weminyaka eli-17, uFuzhou Heng Hua New Material Co, Ltd. Siqinisekile ukunika ilaphu ngokwemfuno zabathengi '. Besithumela kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla kwaye siye sanconywa kakhulu ngabasebenzisi.
Wamkelekile qhagamshelana nathi kwaye uqale intsebenziswano ixesha elide kunye Henghua Nonwoven!
Indwangu yePolypropylene engeyiyo ephothiweyo, Ixabiso leRoll Roll, Non womluki Ilaphu, Polypropylene Spunbond Non womluki Ilaphu, Izinto ezingalukanga, Kk Non womluki Ilaphu,